नेपाली ‘एप' ले बदल्दैछ जीवन
गोपीकृष्ण ढुंगाना शनिवार, कात्तिक १८, २०७४ 9315 पटक पढिएको
अब सवारीसाधन नहुनेले एपको प्रयोगमार्फत थोरै पैसामा अरूकै मोटरसाइकल चढ्न सक्नेछन् । घर, डेरा, होस्टेल खोज्नका लागि घरभेटी डटकमले सहयोग गर्नेछ । तपाईंका विद्युतीय सामान बिग्रिए ‘सजिलो' एपले तपाईंलाई सहज उपाय सुझाइदिनेछ । कृषिका अनेक समस्यामा सहयोग गर्न ‘सोचवेयर' छ ।
‘कृषि घर' ले कृषकलाई खेतीपातीका विविध सूचना र मौसमलगायत विज्ञको सुविधा दिनेछ । ‘नेपा एक्सप्रेस' ले इ-कमर्स व्यापार गर्नेलाई ग्राहककहाँ पुग्न सहज बनाइदिन्छ । नेपालमा पदयात्रा गर्नेका लागि ‘हनीगाइड' छ, जसले कम रकम तिरेर सहज यात्रा गर्न सहज बनाउनेछ ।
‘प्रोडक्ट विद स्टोरी' सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समूहले गर्ने हस्तकलालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान सहयोग गर्नेछ । यी सबैका लागि एउटै सर्त हुनेछ, तपाईंसँग मोबाइलसँगै वाईफाई सुविधा । नेपाली युवायुवतीले सर्वसाधारणको सहजताका लागि तयार पारेका यी एपहरूको १० प्रतिशत मात्र पनि उपयोग भएको छैन, तर पनि इन्टरनेट र सहज स्मार्टफोनको उपलब्धतासँगै त्यसले बजार लिने पक्षमा कुनै शंका छैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था सिडस्टार्स काठमान्डुले एक साताअघि धेरै नेपाली एप्लिकेसनबीच प्रतियोगिता गराउँदा उत्कृष्ट ठानेका एप हुन् यी ।
डेरा र फ्ल्याट मोबाइलमा !
अब कोठा खोज्न हप्तौं घर-घर वा सडक-सडक चहार्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । ‘घरबेटीडटकम' यसमार्फत आफूअनुकूलका कोठा, फ्लाट, घर वा होस्टेल आदि भाडामा लिन र दिन सकिन्छ । यसले कोठा, फ्लाट वा घर खाली हुनुअघि सूचित गर्नेछ भने खोजीमा रहेकाले आवश्यकताअनुसारका कोठा, फ्लाट, घर वा होस्टेल छान्न सक्नेछन् । यसमार्फत घरबेटीसँग तपाईंको सीधा सम्पर्कसमेत हुनेछ । हालसम्म २५० जनाभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले यसैमार्फत कोठा पाइसकेको घरबेटीडटकमका कार्यकारी अधिकृत राजन दाहाल बताउँछन् । एप्स प्रयोग गर्न कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
कृषकलाई सजिलो ‘सोचवेयर'
‘सोचवेयर' ले कृषकका काम सहज बनाउनुका साथै उनीहरूको समयसमेत जोगाउँछ । यसले च्याउ फार्म, कुखुरा फार्मलगायतका लागि तापक्रम, आद्रता र पानीको अवस्था आदि मापन गरी सोको जानकारी मोबाइलमा पठाउँछ । यसमार्फत फार्मबाहिर बसेरै पनि फार्मको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । कानुनी दायराभित्र रहेर कृषिलाई प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य यसको रहेको सोचवेयरकी कार्यकारी अधिकृत इदा रिजाल बताउँछिन् । यसमा थप फोटो, प्रोसेसिङ, स्मार्ट सीसीटीभीलगायत अन्य नवीन विशेषतामा काम गरिररहेको उनको भनाइ छ ।
प्राविधिक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज
‘सजिलो' ले ग्राहकलाई दैनिक आवश्यक पर्ने रेडियो, टीभी, घडी, मोबाइलजस्ता सामानको मर्मत सेवा एकै ठाउँमा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउँछ र सेवा दिनेलाई पनि ठूलो बजारको पहुँच दिलाउँछ । यसले ग्राहकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ । ग्राहकले यो सेवा प्रयोग गर्न फोन नम्बर ५१८६०२३ वा ५१८६०२४ मा अथवा सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस वा वेबसाइटमार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यसमार्फत चार महिनामै चार सय ५० घरमा सेवा दिएको सजिलो मर्मत सेवाका सहसंस्थापक सुजित रेग्मी बताउँछन् । एपलाई नेपाली भाषामा सरल ढंगमा बनाउन लागेको बताउँछन् रेग्मी ।
४. कृषकको कृषिघर
महत्वपूर्ण जानकारीलाई एकत्रित गरेर ‘कृषिघर' बाट कृषिसम्बन्धी संस्थानको टोल फ्री नम्बर, फोन नम्बर, बिमा इत्यादिबारे जानकारी लिन सकिन्छ । इन्टरनेट हुँदा कृषिसम्बन्धी अडियो/भिडियो पुस्तक, कालीमाटी बजार भाउ, मौसमसम्बन्धी जानकारी र अन्य कृषि समाचार पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । कृषिसम्बन्धी भिडियो, अडियो र पुस्तक एउटै एपमार्फत उपलब्ध रहेको यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
५. बजार पुर्‍याउने भरिया
सामान किनमेल गर्ने अनलाइन बजार नै हो ‘प्रडक्ट विद अ स्टोरी' तर यो नाफामूलक नभई नितान्त सामाजिक ‘स्टार्टअप' हो । यसमा पैसाको कारोबार प्रत्यक्ष हुन्छ । दुर्गम भेगका जनसमुदायका जनशक्तिको उत्थान गर्ने र कुनाकन्दराका कला र दुःखका कथा विश्वसामु लैजाने साथै नेपाली सीप र मौलिकता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने योजना यसमा समेटिएको यसका संस्थापक सुशान्त गौतम बताउँछन् ।
६. मोबाइलबाटै बाइक चढ्नुस्
अब सवारीसाधन नहुनेले पनि थोरै पैसा तिरेर बाइकमा यात्रा गर्न सक्नेछन् । यसका लागि तपाईंले ‘टुटल' नामको एप प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अहिलेलाई यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपलब्ध छ । एपमा दर्ता भएपछि मोटरसाइकल धनीले सूचना राख्ने र सोहीअनुसार कसैलाई सोही गन्तव्यका लागि यात्रुले सूचीकृत गरेपछि यो काम अघि बढ्नेछ । सवारी धनीले मान्छे ओसार्दा पैसा पनि पाउनेछन् । तीन किलोमिटरसम्म ६० रुपैयाँ र त्यसपछि किलोमिटर हेरी कति तिर्ने भन्ने एपले नै तय गर्नेछ ।
अलिकति महँगो लागे पनि सार्वजनिक सवारीमा कोचिनुपर्ने र महँगो र अपारदर्शी ट्याक्सीमा रकम तिर्नु नपर्ने हुनाले यो अनुकूल हुनेछ । प्रयोगवापत रकम सीधै वा डिजिटल कारोबार दुवैबाट गर्न सकिनेछ । कुन मोटरसाइकल कहाँ छ र कहाँ जाँदैछ भन्नेदेखि कसको मोटरसाइकलमा को चढेको छजस्ता सुरक्षाका सवाल पनि एपमा सूचीकृत हुनेछन् । यो सुरुआतमा युवा पुस्तामा लोकप्रिय बनेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि इन्धन बचाउन र आपसमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अरूको बाइकमा लिफ्ट लिने काम भएबाट त्यसैबाट यो एप प्रभावित भएको हो । टुटलको सेवालाई उपत्यकाबाहिर लैजाने सोच बनाएको यसका संस्थापक उत्कृष्ट भट्ट बताउँछन् ।
७. घरमै सामान
ग्राहकको घरदैलोसम्म समान पुर्‍याइदिने तेस्रो पक्ष हो- नेपा एक्सप्रेस । ग्राहकसँगको रकम बुझिदिनेदेखि देशभरका विभिन्न एजेन्ट र शाखामार्फत २४ घन्टाभित्र ग्राहकको घरसम्मै समान पुर्‍याइदिने काम नेपा एक्सप्रेसले गर्छ । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको यसको पोखरा, इटहरी, धरान, विराटनगर, नारायणघाट, चितवन, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर गरी प्रमुख सहरमा शाखा छन् ।
स्थापनाको वर्ष दिनभित्र ५५ हजारभन्दा बढी समान घरदैलोसम्म पुर्‍याउन सफल भइसकेको छ नेपा एक्सप्रेस । सबै सहरमा शाखा विस्तार गर्ने यसको लक्ष्य छ । वेब पोर्टल र मोबाइल एपमार्फत कार्य सम्पादन हुने यस कम्पनीले पूर्णतया अनलाइन प्रणालीमा काम गर्छ । हालसम्म ९० भन्दा बढी व्यावसायिक ग्राहक बनाइसकेको नेपा एक्सप्रेसले आफ्ना प्रयोगकर्ता कम्पनीलाई सम्पूर्ण पार्सलहरूको अवस्था अनलाइन जाँच गर्नुका साथै उनीहरूका ग्राहकहरूका प्रतिक्रिया लिन मद्दत गर्दछ । हालसम्म व्यावसायिक ग्राहककेन्द्रित कम्पनीले मोबाइल एप बनाएसँगै व्यक्तिगत सरसमान र चिठीपत्रहरू पनि गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिने नेपा एक्सप्रेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगम सिंह बताउँछिन् ।
८. मोबाइलबाटै हिमाल चढ्ने !
विश्वभर हिमाली पदयात्री तथा क्लाइम्बरले पर्याप्त जानकारीको अभावमा धेरै समस्या भोग्दै आएका छन् । जानकारीकै अभावमा पदयात्रीले टे«ेकिङका क्रममा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ, तर यो एपले पदयात्रीलाई थोरै खर्चमा राम्रा र रोचक अनुभव बटुल्न सक्ने गरी माउन्टेन चढ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । हनीगाइडले हिमालको मौसम, ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङको अनुकूल समयलगायतका बारेमा जानकारी दिनेछ । यसमा बसोवासका लागि होटेल, लज, खानपिनको सूचना उपलब्ध छ । अब चाँडै एपमा एउटै ठाउँबाट बुकिङ गर्न मिल्नेजस्ता सुविधा थपिने हनीगाइडको योजना छ ।
यो एप प्रयोग गर्न कठिन छैन । डाउनलोड गरेपछि आफू जाने क्षेत्र (अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, अन्नपूर्ण सर्किट वा माउन्ट एभरेस्ट आदि) किन्नुपर्छ र त्यसपछि बुकिङ गरेपछि अन्य सबै विषयमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्नेछ । १४ महिनामा १० हजार पदयात्रीले यो एप डाउनलोड गरेका छन् । हालसम्म यो एप किनेर चलाउनुपर्छ, यसको मूल्य चार सय १५ रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा फ्लाइट आदिको सुविधा थपेपछि एप निःशुल्क बनाइने हनीगाइडकी सञ्चार अधिकृत दक्षिणा खड्काले बताइन्।
बम राखेको हल्ला चलेपछि सर्वोच्च अदालतमा तनाव 1549
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 264
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 113
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 243
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 375
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1341
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8894
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14680
नेपाली ‘एप' ले बदल्दैछ जीवन 9315